Badda Soomaaliya Archives - Page 2 of 3 - Sawirrotv
Dacwadda Badda Kenya iyo Soomaaliya oo Maanta la soo Gaba-gabeeyay & Soomaaliya oo maanta la Dhagaystay
September 23, 2016 – Waxaa maanta xarunta Maxkamada caalamiga ah ee ICG ee magaalada Hague lagu soo gaba-gabeeyay dhageysiga ku saabsan dacwadda badda ee u dhaxaysa dowladda Kenya iyo Somaaliya. Dhagaysigan ayaa khuseeyay oo kaliya diidmada ka timid dhinaca Kenya, oo ku doodeysa in maxkamaddan aysan awood u lahayn in ay xaliso murankan kala dhaxeeya …
Dhagaysiga Muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo Maanta la soo Gaba-Gabayn doono (Dhagayso)
September 23, 2016 –Maanta oo ah maalin Jimco ah ayaa waxa ay ku beegantahay maalintii ay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ go’aamisay in ay soo af jari doonto dhagaysiga dacwadaha ay soo kala jeedinayaan labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. Magaalada Hague ee dalka Holland oo ah goobta ay ku taalo maxkamada ICJ-ga ayaa waxaa …
September 22, 2016 –Sheekada Kenya ee Badda Soomaaliya ayaa waxa ay hadda Maraysaa Darbi Xag Xagasho, hadaba Waraysi lala yeesha Safiiradda Kenya u Fadhisa dalka Holland oo ka qayb qaadatay fadhiga maxkamada hadda ka socota magaaladaasi Hague, ayaa waxaa la waydiiyay Su’aalo kul kulul oo la xiriira boobka ay Kenya ku Hayso Badda Soomaaliya. Danjiradda ayaa …
Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa ka hadlay qiyaanada ka danbeysa xeelada kenya ay ku doonayso inay kula wareegto Badda Soomaaliya. Cabdi Ismaaciil ayaa sheegay in dalka Kenya uu murankani ku qasaarinayo lacag kor u dhaafaysa labaatan milyan oo doolar, taas oo ay u aragto lacag aan micno lahayn hadii aad fiiriso, waxa ka soo geli kara hadii …
DAAWO: Fanaanka Weyn ee Xuseen Shire (Ciyaar Jecel) oo ka Hadlay Ragii iibsaday Badda Soomaaliya (VIDEO)
September 21, 2016 – Fanaanka wadaniga ah ee Xuseen Shire (Ciyaar Jecel) ayaa markii u horaysay waxa uu ka hadlay muranka ka taagan badda Soomaaliya ee ay Kenya doonayso inay si xeeladaysan ku qaadato. Xuseen ayaa ka hadlay ayaan darada Soomaaliya haysata, wuxuuna sheegay in Madaxdii waagaas u saxiixday dowladda Kenya inay maanta muran galiso …
September 21, 2016 – Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa iminka ka soconaya banaanbax aad u balaaran oo looga soo horjeedo booka Kenya ay ku waddo badda Soomaaliya. iyadoo ay kasoo qeyb galeen boqolaal dadweyne oo isugu jira madax iyo shacab, ku waas oo ka kala yimid Degmooyinka Gobolka Banaadir. Banaan baxan ayaa …
September 21, 2016 – Dacwadda Badda Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay salka ku heysaa heshiis ay dowladii KMG ahayd ee Soomaaliya la gashay dalka Kenya oo la sheegay in uu ahaa mid is afgarad ahaa, waxayna ku dhegan tahay dowladda Kenya in aan dacwadda lagu qaadin Maxkamadda adduunka ee ICJ oo si wadahadal ah …
Ra’iisul Wasaaraha oo Markii u Horeysay ka Hadlay Eedeymihii loo soo Jeediyay ee Iibsiga Badda (VIDEO)
September 20, 2016 – Ra’iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo maanta booqasho ku gaaray Magaalada Garoowe ee Caasimada Maamulka Puntland, ayaa la hadlay warbaahinta waxa uuna faah faahin ka bixiyay Muranka Badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Cumar C/rashiid ayaa iska fogeeyey in uu ku lug leeyahay arrimaha iibsiga Badda Soomaaliya, …
Yusuf Garaad oo Qoraal ku soo Koobay Dacwadii Bedda ee Soomaaliya ay Maanta Gudbisay (AKHRISO)
September 20, 2016 – Afar qareen oo caalami ah ayaa maanta bixiyay Jawaabta Soomaaliye ee ku wajahan diidmada Kenya ay dooneyso in ay isku hortaagto in Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladdu ay gasho kiiska muranka soohdinta badeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa xusuus mudan in ay dacwadda badda ay marka hore Makxmadda u gudbisay Soomaaliya …
DAAWO: Si LIVE ah Maalintii Labaad ee Dacweda Badda Soomaaliya iyo Kenya (VIDEO)
September 20, 2016 – Daawo sida maanta loogu guda galay, Jawaabtii ay dowladda Soomaaliya ka bixisay muranka dhanka Badda ah ee u dhaxeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliaya. Dowladda Soomaaliya ayaa ka biyodiiday inay dowladda Kenya la galayso wax wada hadal ah oo ku saabsan arintan badda, ayna maxkamadda Caalamiga ah ka sugayso inay …